हरिवंश आचार्य : जस्ले आफू रोएको दिनमा पनि अरुलाई हसाउँथे - उज्यालो पाटो
नेपाली हास्यव्यङ्ग्यको क्षेत्रमा हरिवंशले अहिलेसम्म एकछत्र राज गर्नेमा पर्छन् । सामाजिक साइटहरुमा हेर्नु भयो बेला बेला देख्न पाउँनु हुनेछ कि नेपालमा कसैले नराम्रो नभन्ने सिमित व्यक्तिहरुमा हरिवंश आचार्यको नाम पनि आउँछ । यसको अर्थ उनी नेपालीहरुको मनमनमा पनि राज गर्छन् ।
हरिवंश आचार्यको जन्म वि. स. २०१४ कार्तिक २७ गते भएको थियो । भनिन्छ, हरिवंशको पुराण लगाएपछि मात्र उनको जन्म भएको थियो । यसैले उनको नाम नै हरिवंश राखियो । उनका पिताको नाम होमञ्जय र आमाको नाम गणेश कुमारी हो ।
उनका बाबुको इच्छा उनलाई पण्डित बनाउने थियो । संस्कृत पढेका मान्छे सभ्य हुन्छन् भन्ने मान्यता होमञ्जयको थियो तर हरिवंशमा पण्डित बन्ने मन थिएन । उनी कनुै पनि हालतमा पण्डित बन्न चाहदैन थिए । हरिवंशलाई अग्रेजी पढ्ने धोको थियो ।
११ बर्षको उमेर छदाँ उनकी आमाको मृत्यु भयो । त्यसपछि त उनी आवारा भए । उनको बाल्यकाल एकदमै दुखद रह्यो । उनको पढाइ औसत भन्दा तल खस्कियो । २०३२ सालमा पहिलोपल्ट एसएलसी पद्योदयबाट दिए तर पास हुन सकेनन् । पढाइमा अनेकौ कसरतपछि २०३५ सालमा बल्लतल्ल थर्ड डिभिजनमा पास गरे ।
पढाइ सके पछि केहि समयका लागि उनी रत्नराज्य कलेजमा एकाउन्टेन्ट पनि भए । १३५ रुपैयामा केही समयको लागि काम गरे । उनको घरको अवस्था एकदमै नाजुक थियो । उनी कमाइको केही भाग आफ्नी दिदिलाई घरखर्च चलाउँन दिन्थे । दिदी टंगाल स्कुलमा पढाउनुहुन्थ्यो ।
हरिवंश आचार्यले दर्जनौ चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् । सयौ टेलिचलचित्र र प्रहशनमा अभिनय गरेका छन् । सुरबेसुर, पन्घ्र गते, श्राद्ध प्रहशन, साझा, वनपाले, लालपुर्जा, मदन बहादुर हरि बहादुर, आमा, राजमार्ग, दशैँ, विज्ञापन, एस एल सी, ढलमति, भाइरस, चिरञ्जीवी उनका प्रख्यात टेलिचलचित्र हुन् । कुनै समयमा उनी रंगमञ्चमा पनि उत्तिकै सक्रिय थिए । उनले नाटकका माध्यमबाट जनमानसमा चेतना जगाउन सहयोग गरे ।
हरिवंशका अहिलेसम्म दुई पुस्तक प्रकाशित छन् । चिना हराएको मान्छे उनको पहिलो पुस्तक हो । यस पुस्तकमा उनले आफ्नो जीवनकथा प्रस्तुत गरेका छन् । उनले जीवनमा भोगेका आरोह अबरोहलाई चिना हराएको मान्छेमा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेका छन् । उनको दोस्रो पुस्तक भने “हरिबहादुर” हो ।
हरिवंश अभिनय तथा लेखन बाहेक गायनमा पनि सक्रिय रहेका छन् । उनले गायका गीतले पनि संसारभरका नेपालीहरु माझ ख्याति कमाएका छन् । सारङगी रेटौला, म त खोक्रो सारङगी, चञ्चले चञ्चले, हाम्री आमा साह्रै नै बाठी छन् जस्ता कयौँ हिट गित दिइसकेका आचार्य साच्चै नै बहुमुखी प्रतिभाका धनी छन् ।
उनले २०३२ सालबाट कला यात्रा सुरु गरेका थिए ।
नाटककार जितेन्द्र महतसँगको उनको सहकार्य थियो । एकदिन हरिवंशले नाटक खेलाउन आग्रह गरे । उनले जितेन्द्र महतसँग मिलेर नाटकमा अभिनय गर्न थाले ।
उनको नाटक प्रदर्शनी हुने स्थानमा राजपरिवारको राम्रै जमघट हुन्थ्यो । उनले त्यहाँ अमरसिंह नाटकमा अभिनय गरे । उनको अभिनय देखेर राजाका सचिव उनीबाट प्रभावित भए । उनको त्यहाँबाट थप तलब एक सय रुपैया बढ्यो । त्यो पछि हरिवंशले ‘हाम्रो पनि कथा छ’ भन्ने नाटकमा हास्यप्रधान नाटक गरे । उनको नाटक तत्कालिन रानी ऐश्वर्यलाई खुब रमाइलो लागेछ । रानीको इच्छामा हरिवंशको फेरी एक सय तलब थपिने भएछ ।
हरिवंश आचार्यको मदनकृष्णसँग भेटघाट पनि आकस्मिक रुपमा भएको थियो । बाध्यतावश उनीहरुले एकै नाटकमा काम गर्नु भयो । उनीहरुको प्रदर्शनी हुने समयमा उद्घोषकका रुपमा राजाराम पौडेल थिए । उनले मह जस्तै गुलियो, मह जस्तै कहिल्यै नकुहिने अभिनेता भनेर दुई जनालाई बोलाएका थिए । त्यै दिनबाट उनीहरु मह जोडीका रुपले चिनिन थालेका थिए । त्यसरी सुरु भएको मदनकृष्णसँगको सहकार्य आजसम्म चलिरहेको छ ।
हरिवंशको विवाह बिक्रम संवत २०४० मा मीरा आचार्यसँग भएको थियो । उनीहरुका दुई छोराहरू त्रिलोक आचार्य र मोहित आचार्य छन् । हरिवंश कि श्रीमती मीरा आचार्यको २०११ अप्रिलमा मृत्यु भयो । उनी लामो समय देखि हृदय रोगबाट पिडित थिइन् ।
यस्तो अवस्थामा पनि उनले आफ्नो कर्म छोडेनन् । सो समयमा पनि उनले लगातार हसाइ नै रहे । यसरी हेर्दा व्यक्तिगतरुपमा आफु जे जस्तो अवस्थामा भए पनि हरिवंश आफ्नो हसाउँने कर्ममा सँधै लागिरहेका छन् । उनी आफू पिडामा रहेर पनि अरुलाई हसाउन सिपालु छन् ।
हरिवंशले वि.सं. २०६९ सालमा रमिला पाठकसँग दोस्रो बिहे गरेका छन् । हरिवंशलाई वि.स. २०४६ सालको जगदम्बा श्री पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको थियो ।